कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वः देउवा र डा. महतबीच प्रतिस्पर्धा होला ?
केशव न्यौपाने मंगलबार, असार १५, २०७८ मा प्रकाशित
दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको र सर्बोच्च अदालतमा यसबारे बहस चलिरहँदा नेपालको पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफनो १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । संसद पुनस्र्थापना भएमा आफू प्रधानमन्त्री हुनसक्ने र पेलपाल गरेर फेरि पार्टीको नेतृत्व आफनो हातमा लिन सकएला भन्ने आँकलनका साथ सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने १४ महाधिवेशनमा आफू फेरि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।
कम्युनिष्ट, राजावादीहरु र छिमेकी भारतको चेपुवामा परेर गत स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा धुलिसात् भएको कांग्रेसले पुनर्निजीवन प्राप्त गर्ला ? बहालवाला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा गएको कांग्रेसले संसदमा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने न्यूनतम एक चौथाई मत समेत ल्याउन नसकेकोले कम्तीमा देउवाकै नेतृत्वमा फेरि चुनावमा जाँदा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल नहुनेमा आम नेता कार्यकर्ताहरु र विश्लेषकहरु लगभग स्पष्ट देखिन्छन् । कम्युनिष्ट स्वेच्छाचारी, निरंकुश र भ्रष्ट सरकारबाट आजित जनताले विकल्प त खोजेका छन् । कम्युनिष्ट तानाशाही सरकारका भ्रष्ट क्रियाकलापबाट आजित जनता आगामी चुनावमा उनीहरुको विरुद्धमा उत्रिने निश्चित छ । तर भरपर्दो अर्को विकल्प के छ त ? आम जनताको चाहना के छ भने त्यही देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा भाग लिन आउने कांग्रेसलाई होइन, नेतृत्व परिवर्तन गरेर कम्युनिष्ट स्वेच्छाचारिता विरुद्ध सशक्तरुपमा लड्न सक्ने बलियो काग्रेसलाई स्वागत गर्न लालायित देखिन्छन् ।
कांग्रेस पार्टीमा मूलत दुई खेमा देखिन्छन् । पहिलो कृष्णप्रसाद र दोस्रो गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गरेको समूह । कृष्णप्रसादको उत्तराधिकारीको रुपमा देउवा रहेका छन् जसले कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिको छोरा विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ तथा केही युवा नेताहरुलाई समेटेका छन् । अर्को गिरिजाप्रसादको उत्तराधिकारीको रुपमा रामचन्द्र पौडेल रहेका छन् र उनको समूहमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरु डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, संस्थापक नेता बीपी पुत्र डा शशांक, भतिज डा शेखर,सर्वमान्य नेता गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह, महेश आचार्य, डा मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, युवा नेताहरु चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरु घिमिरे लगायतको ठूलो जत्था छ । १२ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सुशील कोइरालाले चुनाव जित्दा कायम पूरे मत इन्ट्याक्ट राख्न नसक्दा १३ औं महाधिवेशनमा पौडेल सभापति पदमा देउवासँग पराजित हुन पुगेका थिए । देउवाको समूहमा खास नेता छैनन् तर पौडेल समूहमा कांग्रेस हाँक्ने पूरै शक्ति देखिन्छ । त्यसैले पौडेल समूहबाट उनीबाहेक महामन्त्रीमा डा सशांक र कोषाध्यक्षमा सितादेवी यादवसहित पूरै प्यानल निर्वाचित भएका थिए । देउवा आफूबाहेक आफ्नो प्यानल जिताउन असफल भएका थिए भने पौडेल आफूबाहेक प्यानल जिताउन सफल भएका थिए ।
छिमेकीको भूमिका के हुन सक्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको नेताको रुपमा उभ्याउने भारतको चलखेलले मुख्य पार्टीहरुको चुनाव र केही हदसम्म संसदीय आम निर्वाचन समेत प्रभावित हुने गर्छ । पार्टीभित्रका उसका आफन्त वा मित्रहरु र तराईका मतदाताहरुलाई उसले प्रभावित पार्न सक्ने भएकोले चुनाव नजिकिदै गर्दा नेताहरु छिमेकी मुलुकका नेताहरुलाई गुड ह्युमोरमा राख्न चाहन्छन् ।
इतिहासतर्फ दृष्टि दिने हो भने भारतको स्तन्त्रता आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानका खातिर जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया र बीपी कोइरालालाई तिनताक उत्तिकै हैसियतको सम्मान रहेको संगत गर्नेहरु बताउँछन् । तर बिसं २०३३ सालतिर संस्थापनबाट बीपीलाई हतोत्साह गरियो । बीचमा कम्युनिष्टहरुलाई संरक्षण र प्रशिक्षण जारी राख्दै जीवनको उत्तराद्र्धतिर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि नराम्ररी एक्ल्याइएको थियो । यसक्रममा अमेरिकीहरुको सहयोगमा राजसंस्थालाई पनि उखेलेर फाल्नेमा दक्षिणी छिमेकीको भूमिका धेरैको मन झस्काउने खालको देखिन्छ । उसको दोहोरो रणनीतिले पछिल्लो समय नेपालमा कम्युनिष्ट बढाउन र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको स्पष्टै छ । तर एकताका नेपालको कम्युनिष्ट सरकारको चीनसँगको खतरनाक सामिप्यताले भने भारतलाई निकै झस्काइदियो । यसमा परिवर्तन ल्याउन पछिल्लो समय सामन्त गोयलहरुले निकै ठूलो कसरत गर्नुप¥यो । जानकारहरु भन्छन्, भारतीय जनता पार्टीले अर्को चुनाब जित्नका लागि नेपालमा हिन्दु राज्य र संबैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्नैपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय यही कसरत हुँदैछ भन्नेहरु काठमाडौंमा धेरै छन् । तर संबिधानलाई नै निकम्मा नबनाई यो सबै काम संभव देखिदैन । यतातिर थप चर्चा नगरी कांग्रेसको महाधिवेशनतिरै फर्कौं ।
आफैले बर्षौं पालेका कम्युनिष्ट नेताहरुबाट धोका पाएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका विभिन्न महत्वपूर्ण भेटघाटहरुमा भारतका सत्तारुढ दलका नेताहरु नेपालमा कम्युनिष्टसँग जुध्ने बलियो नेता र पार्टी आवश्यक भएको बताउँछन् । नेपाल र भारत दुवैको हित र फाइदा हुने गरी धेरै राजनीतिक, कुटनीतिक तथा आर्थिक निर्णयहरु गर्न चाहन्छन् । विशेषगरी पाकिस्तान तथा चीनभन्दा आफूसँग नजिक भै अगाडि बढ्ने र उनीहरुबाट हुनसक्ने संभावित असुरक्षाका घट्नाबारे सूचना आदान प्रदान लगायत हरतरहले सहयोग पु¥याउने नेतृत्व चाहन्छन् । त्यसैले सरकार परिवर्तनका घट्नामा त हुने नै भयो कांग्रेसको यस चुनावमा पनि छिमेकी भारतको चासो निकै देखिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत सामथ्र्यका साथै भारतीय नेताहरुको आशिर्वाद र सदाशयता समेत हासिल गर्न सक्ने नेतालाई चुनाव जित्न यसकारण निकै सजिलो हुन्छ । किनकि निर्णायक मतदाताहरु उनीहरुले भनेको मान्नेहरु छन् । तर उनीहरुकै खुफिया एजेन्सीहरुका फेरि फरक विचार छन् । दलहरुका चुनावमा चाँहि उनीहरुका सम्पर्कहरुले काम गर्छन् । तिनीहरुले अहिले नेपालमा काम गर्न शुरु गरिसकेको र केही नेताहरुलाई दुवै समूहबाट सहयोगको आश्वासनसहित अघि सारिसकेको चर्चा शुरु भएको छ । उत्तराधिकारीहरुबाट काम नचले चौथो व्यक्तिलाई अघि सार्ने रणनीतिको चर्चा पनि छ ।
नेतृत्वका आकांक्षी र अन्तिम प्रतिस्पर्धा
समयले चाँहि बहुआयमिक करिस्मेटिक नेतृत्व मागेको छ । तर सीमाका बारेमा चीनसँग र भारतसँग तर्कपूर्ण प्रतिवाद गर्न सक्ने बीपी जस्ता करिस्मेटिक नेता अहिले पाउन मुस्किल छ । कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, गणेशमानसिंह, सुवर्ण शम्शेर जस्ता नेता अहिले बचेका छैनन् । सुशील कोइराला जस्ता सादगी नेता पनि छैनन् । समकालीन नेतृत्वमध्ये उत्कष्ट छनोट गर्ने विकल्प मात्र उपलब्ध छ । बहुआयामिक र करिस्मेटिक नेतृत्व उपलब्ध नभएपनि समकालीन नेपालको दलीय राजनीतिमा सक्षम एवं विषय विज्ञता भएका प्रशस्त नेताहरु भएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । उमेरको एउटा सीमा पार गर्दै गरेका नेता पनि थुप्रै भएकोले नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु पनि धेरै संख्यामा देखिएका छन् । तीमध्ये देउवाका अतिरिक्त चर्चित नामहरु हुन्, रामचन्द्र पौडेल, डा.रामशरण महत, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि हुन । यसपटक कृष्ण सिटौला चुपचाप छन् । नाम थुप्रै भएपनि अन्तिम स्पर्धा दुईपक्षबीच नै हुनेछ । उमेरगत हिसावले भावनात्मक शक्तिका साथ पौडेलले देउवासँग अर्को पक्षबाट चुनाव लड्ने सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर सुशील कोइरालाको दुई तिहाईको विरासतबाट पनि अघिल्लो चुनावमा जित्न नसकेको र आफ्नो टीमका सबैले जितेकोले उनले जित्ने संभावना नरहेको सो पक्षको विश्लेषण रहेको छ । वरिष्ठता र स्वीकार्यताका आधारमा यस समूहमा डा महत मात्र बाँकी छन् । उच्च पदमा नेताहरुको व्यवस्थापन र महामन्त्रीभन्दा तलका पदमा युवाहरुको तार्किक र बैज्ञानिक संयोजन गर्न सकेमा डा. महतले यसपटक बाजी मार्न सक्छन् ।
तर उनी आएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलको हैसियत कसरी सुरक्षित हुन्छ, उनले चाहेको पद पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चिन्ता देखिन्छ । पार्टीभन्दा सरकारमा बढी काम देखाउन सक्ने डा महतले पछि कोइराला परिवारलाई नेतृत्व सुम्पिन्छन् कि सुम्पिदैनन् भन्ने चिन्ता देखिन्छ । गगन थापा लगायतका युवाहरु डा महत पार्टी सभापति भएमा पार्टीमा एक किसिमको पार्टीको सांगठनिक तथा संस्थागत विकास त हुन सक्छ तर पार्टी नेतृत्वमा आफूहरुको हैसियत सुनिश्चित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा शंका छ । । डा.महत क्षमताका हिसावले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भएका नेता हुन भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रका बौद्धिक बहसहरुमा समेत सहजरुपमा स्वीकारिन्छन् । उनले भारतका थुप्रै बौद्धिक मञ्चहरुमा यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रखर प्रस्तुति दिएका छन् र निकै प्रभाव पार्न सफल भएका छन् ।
विसं २०४७ पछिको नेपाली कांग्रेसको नीतिगत दस्तावेज निर्माणमा उनको मुख्य भूमिका रहेको छ । उनीबाहेक अरु कसैले पनि नयाँ काम गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट सरकारले समेत उनले अघि सारेकै नीति पछ्याएको र नयाँ काम गर्न नसकेको देखिएपछि उनको स्वीकार्यता पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विस्तार भएको छ । देउवा नेविसंघको सभापति हुँदा महामन्त्री रहेका डा महत वरिष्ठता र समकालीन भएकोले मात्र होइन, अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने देउवा र डा. महतको २५।२६ प्रतिशत भोटब्यांक समान छ । विशेषगरी काठमाडौं र आसपास, मध्य तथा सुदूरपश्चिम, पूर्वी पहाड तथा पूर्वी तराईको विभिन्न क्लस्टरमा आधारित निर्णायक यो मत अहिलेको अवस्थामा अन्य उम्मेद्वारतर्फ मोडिन सक्ने संभावनै छैन । यसअघि पार्टीको तत्कालीन संस्थापन पक्ष सुशीलको पक्षमा देखिएको दुईतिहाई भन्दा बढी मत चुनावताका आश्चर्यजनक ढंगले स्वीङ भएको थियो र यसको खास कारण पनि समान भोटब्यांक नै हो । महाधिवेशनको तयारी गर्दैगर्दा पौडेल पक्षीय नेताहरुले यस आयामलाई बुझ्ने कसरत गर्नैपर्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंहले चुनाव जित्न अगुवाई गर्ने नेता नरेन्द्र मोदीलाई अघि सारे र उनकै मन्त्रिमण्डलमा सिंह गृहमन्त्री भएको घट्ना यहाँ स्मरणयोग्य छ ।
अर्कोतिर, देउवाको नेतृत्व सर्वत्र असफल देखिएको छ । सरकारका बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमिताको सशक्त विरोध गर्न सकेनन् । त्यतिमात्र होइन, पार्टी सभापति देउवा सरकारको असन्तुलित विदेश नीति लगायत जल्दाबल्दा र विवादित मुद्दामा कडा प्रतिक्रिया सम्म दिनसमेत नसक्ने निरीह देखिए । उनको पार्टी सत्तामा पनि ओलीको सरकारमा जस्तै वेथिति र चरम अव्यवस्थापन देखियो । सभापति देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पार्टी धुलीसात भएको छ । पछिल्लो संसदीय चुनावमा पार्टीको त्योभन्दा लज्जाजनक पराजयप्रति देउवाले नैतिक जिम्मेवारी समेत लिएनन् । पदत्याग्ने त परैको कुरा, पार्टीशक्तिमा टिकीरहन अहिले पनि अनेक दाउपेच गरिरहेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने नैतिकता देउवामा बाँकी त छैन । तथापि उनका प्रतिद्वन्द्वीहरुमा एकता नभए फेरि पनि देउवाले दाउ लाउने कुरामा शंका छैन । पार्टी नेतृत्वका आकांक्षीहरुले अलिकति मात्र पनि बुद्धि पु¥याएनन् भने साधन स्रोत र तिकडमको भरपूर प्रयोग गर्न सक्ने देउवाले नै नेतृत्व हात पार्न सक्छन् । किनकि निधि, डा शेखर र सिटौलाको उम्मेद्वारी पार्टीभित्रको स्वीकार्यता भन्दा पनि रणनीतिक चातुर्य र खास उद्देश्यका साथ आएको छ । त्यही भएर डा शेखरले त डा महत र पौडेललाई तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ कायम हुनुहुन्छ, मलाई पार्टीको सभापति दिनुहोस भन्दै हिडिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सहयोग भने यिनीहरुलाई स्पष्टै देखिन्छ । यस्तो सहयोग यसपटक देउवालाई पनि सहजै प्राप्त हुने देखिदैन । तर पनि चलाखीपूर्ण समायोजन हुन सक्नेछ ।
केशव न्यौपानेबाट थप
प्रशिक्षक अलमुताइरी - ‘क्षमता’ र ‘घमन्ड’ दुवैमा अब्बल!
ओलीको दसैं, तिहार गीत र मिठासहरू
‘क्रान्तिमा होमिएको योद्धाको दसैँ : मनमा कि वनमा’
‘स्वर्गको टुक्रा’मा सरकारी पूजा